Global Voices teny Malagasy » Melohin’ny mpiaro ny tontolo iainana ny fanapahan-kevitry ny Sri Lankey hamatsiana fitaovam-piadiana ireo vondrona ao an-toerana hiadiana amin’ny elefanta · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Febroary 2020 4:50 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Azia Atsimo, Sri Lanka, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Zon'olombelona
Elefanta mandro ao amin'ny Toby Fitazaina Elefanta ao Pinnawala. 2017. Sary avy amin'ny mpanoratra.
Miahiahy  ny mpikatroka ao Sri Lanka taorian'ny nanambaran'ny  governemanta ny drafitra hamoahana basy ho an'ny zandary vaovao (hery nomem-piadiana) nofanina hiaro ireo tantsaha amin'ny elefanta.
Tombanana ho 7.500 eo ho eo ny isan'ireo elefanta mpirenireny any Sri Lanka ary olana lehibe ny fifandonan'ny elefanta sy ny olombelona ho an'ny tantsaha ao an-toerana. Mihena ny fonenan'ny elefanta rehefa nisalovana tsikelikely ny toerana fivezivezen'izy ireo ny olombelona. Rehefa tsy manana toerana handehanana intsony ireo biby ireo dia lasa nanapotika ny voly teny an-tanimboly amin'ny fitadiavana sakafo. Nahita azy ireo ho biby mpanimba voly atahorana  ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra sasany ary maro ny olona namoy ny ainy tamin'ny fifanandrinana tamin'ny elefanta. Tamin'ny taona 2019 fotsiny no manodidina ny 100 teo ireo olona matin'ny elefanta .
Nandritra ny taona 2019, elefanta miisa 361 , izay betsaka indrindra hatramin'izay, no maty tany Sri Lanka ary 85% no novonoin'ny olona ho valifaty tamin'ny ‘fanimbana masomboly’. Isan-taona, mahafaty olona am-polony ny elefanta ary manimba ny fambolena sy ny fiveloman'ny olona ary novonoin'ny olona tamin'ny  fefy misy herinaratra, poizina ary baomba  miafina any anaty sakafo izy ireo.
Nahatratra ny isan'ny elefanta maty betsaka indrindra i Sri Lanka tamin'ny taona 2019, 85% no novonoin'ny Olombelona. Ny fefy misy herinaratra, poizina ary baomba no inoana fa antony nahafaty ireo elefanta mpirenireny maty. Matoky ny Governemanta Sri Lankey izahay mba hihetsika avy hatrany.
Heloka bevava ny famonoana ny elefanta mpirenireny any Sri Lanka izay, amin'ny endriny henjana indrindra dia mety hahazoana fanamelohana ho faty. Saingy tsy manakana ny famonoana ny elefanta anefa izany satria matetika no milaza izany ho fiarovan-tena ny olona.
Basy ho vahaolana
Nandritra ny taona maro izay, nandray fepetra maromaro hampihenana ny fifandonan'ny elefanta sy ny olombelona ny governemanta Sri Lankey , ​​ao anatin'izany ny famindrana toerana ireo tantsaha  mipetraka eny amoron'ny ala sy ny fanomezana fefy misy herinaratra  .
Vakio: Manakona ny fifandonan'ny olona sy ny elefanta ao Sri Lanka ny fivoahan'ny ‘EleFriendly Bus’ voalohany indrindra eto amin'izao tontolo izao 
Tamin'ny 13 Janoary 2020, nanambara  ny Minisiteran'ny Fiarovana ny Valan-javaboary any Sri Lanka fa naka zandary (hery nomem-piadiana no lazaina ho zandary eto) matanjaka miisa 2.500 ny governemanta izay ahitana mpilatsaka an-tsitrapo ao an-toerana amin'ireo faritra tena voakasiky ny fifandonan'ny elefanta sy ny olombelona. Efa natomboka ny dingana voalohany  tamin'ny fandaharan'asa. Mahazo basy dimy isaky ny olona valo hampandosirana ireo elefanta ny zandary. Novolavolaina ihany koa ny fananganana fefy matanjaka fanampiana avy amin'ny governemanta Shinoa hiarovana amin'ny elefanta.
Nampiaka-peo ny olona nanohitra ny fanapahan-kevitra hamatsiana basy ireo mpilatsaka an-tsitrapo eo an-toerana. Na dia nolazaina aza fa natao hampitahorana fotsiny ireo elefanta ny fanomezana basy dia mety azo vonoina amin'ny fitaovam-piadiana ihany koa ny elefanta satria mampiasa fomba isankarazany toy ny poizina sy zava-mirefotra mba hamonoana ireo elefanta isan-taona ny olona. Nilaza i Uween Jayasinha, mpahay lalàna fa nomen'ny governemanta alalana ny olona hamono.
“Mahavariana noho ny antony maro io fanapahan-kevitry ny Governemanta [hamoaka ny basy fihazana miisa 2.000 ho an'ny tantsaha) io, indrindra indrindra noho ny fahafohizam-pijery momba ny fanomezana àlalana ny olom-pireneny hamono na hanakilema ireo elefanta “
Nanoratra tao amin'ny Groundviews  i Sunela Jayawardane:
Tena tsy mahomby ny famonoana elefanta amin'ny basy fihazana. Mahalana vao mahavono biby vaventy toy izany avy hatrany ny balam-by kely. Fa kosa, mijanona eo amin'ny hoditra ny bala, miteraka ratra izay manonitra sy mamoro-nana mandritra ny volana maromaro vao mitondra otrikaretina ary avy eo mampihena ny fivezivezena ka mahatonga ny hanohanana ary mamono ireto aristokraty goavana ao anaty kirihitr'alan'i Sri Lanka ireto. Miseho ity fampijaliana mitarazoka sy maharary ity, miaraka amin'ireo elefanta trotraka izay manao antso farany, mandona fo, mitelin-drora toy ny zaza, fitarainam-pahoriana.
Nasongadin'i Jayawardane ny tatitra iray tao amin'ny YouTube avy amin'ny gazetiboky Sri Lankey iray Pulse.lk  izay nilaza fa nomena basy miisa 2.000 ireo tantsaha sy ny mponina mba hiarovany tenany amin'ny elefanta ary mbola misy maro hafa no havoaka.
Tao anatin'ny tatitra, nampahatsiahy i Sumith Pilapitiya, Tale Jeneralin'ny Fiarovana ny Valan-javaboary teo aloha fa tsy azo ratraina ny elefanta raha araka ny lalàna. Na izany aza, namoaka basy ho an'ny sivily mba ho fiarovana ny governemanta.
Nampitandrina i Nishan Wijetunge, mpikambana ao amin'ny komitin'ny Fikambanana Inbound Tour Operators any Sri Lanka fa midika ny fanomezana basy ho an'ny sivily fa hitombo be ny fihazana biby karazana hafa an-tsokosoko ary mety hitombo ihany koa ny indostrian'ny hena tsy ara-dalàna.
Nanaitra ny mpiasa sy ny vahiny ilay elefanta rehefa nirenireny nankao amin'ny trano fandraisam-bahinin'ny hotely mihaja iray tany Sri Lanka
Vao haingana no nekena  ho firenena tsara indrindra ao Azia ho an'ny fizahan-tany ijerena biby i Sri Lanka. Elefanta an-jatony isan-taona no miandrona eo amoron-drano tranainy ao amin'ny Valan-javaboarim-pirenena Minneriya any avaratra afovoan'i Sri Lanka – izay fantatr'izao tontolo izao amin'ny anarana hoe ‘The Gathering ‘ (Fiandronana). Manontany  i Jayawardane :
Manontany tena aho hoe moa ve ny mpankafy ny bibidia eto amin'izao tontolo izao maniry hitsidika firenena iray izay mamono ireo elefantany tsy misy fitsaharana? Moa ve i Sri Lanka, izay manaisotra ny elefanta mahatalanjona ankehitriny ao amin'ny Harem-pirenena mba ho biby mpandravarava no ho paradisa nofinofisin'ireo mpizahatany maoderina?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/02/05/146709/
 biby mpanimba voly atahorana: https://www.bbc.com/news/world-asia-51076898
 matin'ny elefanta: http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/11/c_138697278.htm
 famindrana toerana ireo tantsaha: http://saudigazette.com.sa/article/163404
 fefy misy herinaratra: https://www.thejakartapost.com/news/2018/08/08/shock-treatment-as-sri-lanka-battles-wild-elephants.html
 Manakona ny fifandonan'ny olona sy ny elefanta ao Sri Lanka ny fivoahan'ny ‘EleFriendly Bus’ voalohany indrindra eto amin'izao tontolo izao: https://globalvoices.org/2017/10/13/the-worlds-first-elefriendly-bus-curtails-human-elephant-conflict-in-sri-lanka/
 dingana voalohany: http://www.colombopage.com/archive_20A/Jan12_1578850974CH.php
 The Gathering: https://edition.cnn.com/travel/article/sri-lanka-elephant-migration/index.html